Chinwiwa & Tini Matini Fekitori, Vatengesi - China Beverage & Waini Matini Vagadziri
3-chidimbu chesimbi tinplate inogona kurongedza Inwa & Beverage
3-chidimbuMetal tinplate can_ Beverage Inogona Type Necked-in inogona Kuonda kweinogona muviri 0.18 / 0.19 / 0.21 / 0.23 / 0.24 / 0.25mm yekutanga giredhi Tinplate Dhayamita Φ 52 / Φ 65 / Φ 70 / Φ 80 mm Vhoriyamu 180ml -1000ml Tinplate Inogona Kushandiswa kwekofi, chinwiwa, chikafu, keke, zvihwitsi nezvimwe Kudhinda 4 mavara (CMYK) kudhinda kunze, PANTONE COLOR uye yemukati lacquered zvinogamuchirwa. Simba rekugadzira: 200000 pcs pazuva reerosol inogona; 30000 machira pazuva ekudhinda MOQ: depen ...
750ml simbi isina chinhu inogona kuputira whiskey
Tsananguro 750ml simbi isina chinhu inogona kurongedza whiskey Chigadzirwa Kodhi BC-F-104 Dimension 104X48X200mm (H) Uhishi Yekushandisa, waini, kofi, mafuta anodyiwa. nezvimwewo Zvimwe Zvimiro Simbi yesimbi yekuvhara nemabhodhi epurasitiki mukati
Tinplate inogona nealuminium EOE yakavharirwa kurongedza doro nyowani
Tsananguro Tsananguro Tinplate inogona nealuminium EOE yakavharirwa yekuisa nyowani doro Chigadzirwa Kodhi BC-307 # Dimension Dia 83.5x188mm (H) Kushandisa Nyowani yekumwa doro, zvinwiwa, waini, kofi, mafuta anodyiwa. nezvimwewo Zvimwe Zvitauro 307 # aluminium yakapusa kuvhurika Chikafu-giredhi Tinplate zvinhu zvinogona kushandiswa kugadzira makani ekupakata akawanda marudzi ezvinwiwa. Sekuwedzera kwekuda kwedoro nyowani mumusika, varume vazhinji uye vazhinji senge doro nyowani yekuravira kuri nani. Nemagaba epasi anotengeswa ku ...